imibono yebhizinisi imibono universal is rinaldo enkulu
Iphrojekthi iqala ngombono
Udinga iqembu elikhulu nendawo eningi?
Ngabe usebenza kangcono uma ukhetha indawo?
Yonke inkampani ithola ukusebenza kwayo
Ekugcineni, umphumela ubala ...
Wena nenkampani yakho nikhethekile ekwenzeni izinto ezintsha
Akunandaba noma yini * izinga.
Isidingo sokuqala sokwazi ukusebenza ndawonye ...
ayatholakala, abhekwe futhi ahlaziywa. Izidingo zakho nezinhloso zakho ziyaziwa.
Kusukela kulokhu manje, phakathi kwezinye izinto kuvela okuthile “okusha”. Ngokucwaninga nokusebenzisa amasu ahlukahlukene okudala, kucatshangelwa imakethe kanye neqembu elitshengiswayo, umqondo owenziwe ngomsila uyakhiwa.
Ukuhlela kanye nokwenza
Kusuka lapha "ithimba lakho"
ukuqhubeka nokwenza umsebenzi.
Vele, ngizoqhubeka nokukusiza lapho ucela ukwelulekwa.
Kungenzeka ukuhambisana nezinye izingxenye zephrojekthi.
Ingqondo yokudala iyithuluzi
Woza nami ukumthola
Nazi izinambuzane ezimbalwa ezikhuthazayo:
Ukubambisana, ukubambisana, izinqubo zokuthuthuka, ubuhlakani, ubunjiniyela, ubuqambi, ukuthuthukiswa komqondo, ubuciko bemiklamo, ubuchwepheshe, imikhiqizo, izinqubo, ukuhlangana, izinsizakalo, amaphrojekthi, izeluleko, ukushintshaniswa, isayensi, i-zeitgeist, ukusungula okusha, inqubekela phambili, isipiliyoni, imfundo, amalungelo obunikazi, namuhla, izimbangela Ucwaningo, ukuhlaziya, izibalo, ukuxhumana, izixazululo ezihlakaniphile, ukugcinwa, imigqa emisha yebhizinisi, ukuthuthukiswa, ukuhlaziywa kwesakhiwo senkampani yakho, ubuchule obuphezulu, izeluleko zokuqalisa, ukwakhiwa kwezakhiwo, umuntu ngamunye,
Ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukusungula izinto ezintsha, ukuhlaziya, ukucwaninga nokuhlaziya, usizo, ukuxhumanisa, ukuhlela, isu, idatha enkulu, izibalo, izibalo, iFibunacci, ubuhlakani bokufakelwa, ukufunda ngomshini, ukuqondisisa, ukucabanga kabusha, ukwenqaba, ukuphepha, ukusebenza kahle, ucwaningo, amandla, idizayini, mayelana ukubheka ngaphandle kwebhokisi.
Kunezimo eziyinkulungwane neyodwa ongakwazi ukuya ngazo ngaphandle kwemibono ...
Ingadi egcwele imibono idinga ukunakekelwa ochwepheshe
Uzakwethu Womhlaba Wonke Imibono Nezixazululo
EGibhithe ngoMsombuluko kuya ngeSonto (Mon-Sun) ngo-10: 00 kuya ku-7: 00
Yocingo Messenger 24h 7d
I-WhatsApp 24h 7d
I-Google Hangouts 24h / 7d
Ucingo lwevidiyo G o o g l e Hlangana
(ngesivumelwano / ngokufaneleyo nangohlelo / pr. accordo)
Ngo amaphrojekthi asebenzayo isikhathi akunandaba
Ngo Active Projects isikhathi doesn`t count
I-projetto Attivo il Tempo engenziwanga nzalo
IsiNgisi / EJalimane / e- Italy
Leli sayithi lisebenzisa ukubethela kwe-SSL ukwenza ukusefa kuphephe
* Isixhumanisi ngemuva kwaso ...